Ikhosi epheleleyo yeArcMap ngeSpanish-Geofumadas
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/Ikhosi epheleleyo yeArmMap ngesiSpanish
ArcGIS-ESRIUkufundisa i-CAD / GISGeospatial - GIS
Le khosi epheleleyo yeArmMap, kunye nemizekelo kunye namavidiyo afakiwe.
Izinto eziphathekayo ngumkhiqizo kaRodrigo Nórbega kunye noLuis Hernán Retamal Muñoz oqalise kule nyathelo, okokuqala kwakuyiPortugal kwaye nangona izivivinyo ziyiinguqu ze-8, ingqiqo yabo yokuguqula ayitshintshanga kakhulu.
Kulo isahluko sokuqala Iinkcazo kunye nezinye iigama ze-GIS zifakiwe.
Isahluko sesibini lijoliswe ekusebenziseni izixhobo ezisisiseko:
Iibhloko, iimpawu, ukuhamba kunye nokubhala iileyibhile, kufaka kwakhona icandelo lemibuzo engundoqo yendawo.
Kwi sahluko sesithathu jolise kwi ukuveliswa kwemephu, ngokugqibeleleyo ekujongeni izixhobo zokuvelisa
Isahluko sesine imixholo ye vectorization kunye nokungenisa amafomathi e-CAD, ukulungiswa kweefayile zokufometha, kunye nokulwa kweedatha ezingenakucwangciswa ngeendlela zokulawula.
Iziqendu ezimbini zokugqibela zi malunga ne ukuphathwa kwedatha, ngeCatalog Archives, ulawulo lweimenenclatures, isizukulwana sesigodlo, i-metadata kunye neenkqubo zokubala; ngaphandle kokushiya ukudibanisa kwiziseko Idatha yeOle kunye ne-Geodatabase yomntu.
Enye yezibonelelo ezilungileyo ezi zinto zigcinwa ngamavidiyo eskrini, apho unokufunda khona kuninzi ngeencwadi ezibhalwayo. Okukule nkcazelo yilayisenisi yamahhala, ngoko ke unokuyikopisha, ifakwe kwaye ifakwe kwiinjongo zemfundo ngokubhekiselele kumbhali kwaye ugcine unonophelo lokuba ungayitshintshi isiqulatho (ungasebenzisa imihlathi engqinelanayo ukuba ufuna ukufaka umxholo).
Uhlaziyo luka-Agasti ka-2011: Imbi kakhulu, yabanjelwa indawo eyayingasaboneleli ngenkonzo. Ke kuyakufuneka silinde ukuba zilungiselelwe kwenye indawo.
Uhlaziyo luka-Matshi 2012: I-Starmedia khange ibonelele ngokuqhubekeka kwisizinda sedorisweb, apho babebanjelwe khona ngaphambili, kodwa bakwazile ukubafumana kwiimultimania.es. Zonke izixhumanisi zihlaziyiwe, nangona kufuneka uphile kunye neentengiso ezimbalwa ezingenakukhunjulwa ekubanjweni kwamahhala kwaye ngokufuziselayo zihlawulela inkonzo yamahhala yabalobi beetitshala.
orthophotos Njengoko georeferenced ku Google Earth
I-Sweet Taste yeCadastre
UManuel Orlando Martinez uthi:
Ndifuna ukuthenga incwadi ngesiSpanish
Ukungalungi, asikunikezi izifundo ze-ArcView
HUMBERTO GUTIERREZ uthi:
XAZA UKUBA UNOKUQOQESHWA KWE-VIW
UKUSEBENZA KUNYE UMSEBENZI WOKUQALA
Olunye uqeqesho lwevidiyo leSkimatics kwi-ArcMap Tutorial, okanye apho ndiyakwazi ukukhuphela ukuzivocavoca
Le ncwadana ayilungiswanga yiGeofumadas, sikunike yona kuphela.
Oku kungasetyenziswa xa nje kungengenzuzo, ngokubhekiselele kwii-credits ezibhekiselele kuyo:
URAYYNA MICAELA UFUTA TORRES uthi:
Ngomso mva, ndikubhalela kwi-Chihuahua, eMexico. Ndisebenza kwincwadi yamabhuku kwaye sinomdla kakhulu ekufumaneni izikhokelo zazo ze-ArcMap ngesiSpanish kwaye ndifuna ukuba ubonise amanyathelo okumele alandele.
Ndiyabulela kusengaphambili ukuba uyincede kwaye ndiyinkonzo yakho .Reyna Micaela Flores Torres
UJuan Pucha uthi:
Ndinomdla kwiCOPANISH COPY KULAWULO LWE-ARGIS 10 PROGRAM
Francisco Mendez Marin uthi:
Ndingayifumana phi incwadana yeArcmap, ndinomsebenzi kwaye andifumani ndlela yokwenza indawo ye-utm itshintshe…. enkosi
Ndiye ndazihlaziya ii-link.
Hayi, ibhulogi kaFranz ayikho kwiGeofumadas.
Kuya kuba mnandi ukuba unxibelelwano, umbuzo othi iBranz Blog ibengamaGeofumadas.
UJosé Luis uthi:
Ii-hyperlink eziqhelekileyo zidibanisa iindaba ezivela kwi-starmedia, ngaba ungadlula idilesi ngqo? Ndiyabonga kakhulu.
ukufunda iArggis mahhala
faka iphepha lephiko:
Iinqununu zinegciwane le-Iframe Trojan okanye into enjalo. Ukuba ungawalayisha kwi-server yehhala, iya kuvuzwa
Jorge Sierra uthi:
Ukulungiswa, uya kuthi iincwadi zika Rodrigo Nórbega kunye noLuis Hernán Retamal Muñoz. Ndabanikezela ngokwahlukileyo kwithuba.
Ndandifuna ukuya kwiphepha leencwadi ze-g! kodwa banentsholongwane, iTrojan ingenakunyuswa yi-antivirus yam.
Nge-Intanethi ungayifumana amavidiyo kunye nezifundo ezinjengelikhankanywe kule post. Le nkqubo iya kufuneka ukuyithenge, okanye ukuya kumasasa kwisixeko sakho onokukunika ingcaciso yeentsuku ze-30 ukuze ufunde.
Ezinye iindlela zokufumana ngokungekho mthethweni zingekho kwiimpawu zokuziphatha.
Ndingathanda ukwazi indlela endingafunda ngayo i-arcmap.conseguir kwenkqubo kunye nencwadana. Ngaba ungafunda kwi-intanethi?
Ndiyincoma iividiyo kwiwebsite yeGabriel Ortiz, ndiqinisekile ukuba i-ArcGIS iya kuba lula ukuyifunda.
Uyabona njani wena, ndinomdla ekufundeni konke malunga ne-gis kwimephu ye-arc kunye ne-arc gis kwaye ndingathanda ukufumana le ncwadana. mbulela
nceda ndingathanda ukufumana incwadana ye-ArcGis kuba andinayo ithuba lokuyifumana kwi-intanethi
Uyazi uAlfonso Cruz. Ndifuna ukumfumana
Sawubona u-Diego, kuzo zonke ezo ziqhagamshelo, ezifana "nesahluko sokuqala" sikuthatha kwincwadana yemigaqo, okwenzekayo kukuba akusilo uxwebhu, kodwa yiwebhusayithi kuba inevidiyo.
nditsho ngqo apho le ncwadana ifumaneka khona, ndiya kukubulela ngokubanzi ngeprogram ekhoyo
iincwadi ezikhoyo zifumaneka kwii-hyperlinks post, iphinda ikhuthazwe amanye amavidiyo ase-forum yeGabriel Ortiz
U-HELLO UNGAKUNYE UKUFUMANA NONKE I-MANGALI YASE-ARGIS NJENGOBA NDIYAVUNA NGOKUFUNDA